I-Apple Watch 2 ingaletha izinketho zokugcina | Ngivela kwa-mac
I-Apple Watch 2 ingaletha izinketho zokugcina
Njengoba nonke nazi, i-Apple Watch ye isizukulwane sokuqala sinomthamo wokugcina onqunyelwe. Kangangokuthi yagxekwa ngenkathi iqala ukuthengiswa ngonyaka nohhafu owedlule, noma ngabe mhlawumbe yayingadingi umthamo owengeziwe ngaleso sikhathi.
Siyakukholwa lokho kulo nyaka bazosethulela i-Apple Watch 2 entsha ngochungechunge lwezici ezithokozisayo nokuthuthuka. Enye yazo kuzoba inketho yokwandisa isitoreji, njenge-iPhone noma i-iPad. Okokugcina, isesekeli somuntu siqu kakhulu se-apula elilonyiwe lizosivumela ukuthi sithathe imisebenzi yalo siqhubeke kancane futhi siphule imigoqo yamandla.
1 Izinketho ezimbili zokugcina ze-Apple Watch 2 yakho
2 Konke mayelana ne-Apple Watch 2
Izinketho ezimbili zokugcina ze-Apple Watch 2 yakho
Okwamanje okuwukuphela kwento ongakhetha kuyo yi-8Gb, lapho kuhlukaniswe khona izinhlelo, izithombe, umculo, njll. Kepha lokho kuzoshintsha, noma okungenani kuzothuthuka. Sibonile ukuthi i-Apple yethule kanjani futhi kubhaliswe imikhiqizo eminingana engaqondakali ne-CEE. Kuthiwa kuze kufinyelele kwayi-10 yaleyo mikhiqizo kwakuyi-Apple Watch, okusishiya sididekile ngoba njengamanje sinamabanga amathathu ahlukene nosayizi o-3 lilinye, okwenza ingqikithi ibe ngu-2, hhayi 6. Ukuguqula lolu daba sesize isiphetho esithakazelisa kakhulu, futhi lokho ukuthi mhlawumbe i-Edishini inamandla okugcina kuphela, kepha i-Watch ne-Sport range izofika ngezinhlobo ezimbili ezihlukile.
Lokho kunjalo, futhi ukuze ungadli kakhulu. I-Apple Watch 2 ezigabeni zayo ezijwayelekile izofika nenketho engu-8 no-16Gb. Vele, wonke amamodeli amathathu wewashi azoba ngama-38 noma ama-42mm. Uma siyibuka kanjena, sizoba nenani lamamodeli ayi-10. I-Edition ayinangqondo ukukunikeza inketho yesitoreji esingaphezulu noma esincane, ngoba uma usebenzisa imali engama- € 13.000 ewashini akubukeki kukuhle ukutshelwa ukuthi "nge- € 50 ngaphezulu siphinda kabili isitoreji sakho."
Ngiyaqiniseka impela ukuthi yilokhu esizokubona enkulumweni esemqoka ngesonto elizayo. Ngikhumbula ukwanda kwesitoreji nokwazi I-Apple ngeke isinike kanjalo njeKuzosibiza ukuthi sikhokhe imali ehlanganisiwe engicabanga ukuthi ayi- € 100, njenge-iPhone, kodwa yi- € 50. Intengo enengqondo kakhudlwana. Ngakho-ke, sikholwa ukuthi amanani we-Apple Watch Sport azoqala ku- $ 299 futhi azokhuphuka ngama- € 50 ekuthuthukisweni ngakunye. Usayizi ongaphezulu noma isitoreji esiningi.
Konke mayelana ne-Apple Watch 2
Lesi sizukulwane sizoba ngoludala ekwakhiweni nasezintanjeni. Sizobona cishe akukho buhle noma ukusebenza okusha. Zizothuthuka, yebo, ibhethri kakhulu. Kuze kube ngu-35% ngaphezulu ezingeni lehadiwe. Kulokhu kungezwa iprosesa enamandla kakhulu futhi esebenzayo. Izokuba namandla angakaze abonwe kulokhu okusetshenziswayo nalokhu kukhuphuka engikushilo ngaphambili kumthamo wokugcina. Umzimba omncane omncane nokumelana okukhulu, kokubili ukushaqeka namanzi.
Kulabo abanesizukulwane sokuqala sale nsiza, angikukhuthazi ukuvuselelwa ngaphandle kokuthi banikeze ukubaluleka kakhulu emisebenzini yezempilo futhi bangazisebenzisa ngokugcwele izindaba, ezingeke zibe ziningi. Mhlawumbe okugqamile yilokho ekugcineni ngizophatha i-GPS, ezokwenza umqondo ngokwengeziwe ku-Apple Watch, yize izofaka ukusetshenziswa kwamandla aphezulu. Noma kunjalo nge-processor nokwanda okuphawulekayo kwebhethri ngeke sikubone.
I-Apple Watch ngeke ibe nezici zokulinganisa ubuthongo, okungaphezu kwalokho okungenzeka ukuthi ikhona njengamanje. Ngaleyo ndlela, ibhethri liseseyinkinga, futhi nokuthi kuhloswe ngalo ukuthi libe iwashi hhayi ibhande lokulinganisa lamahora angama-24. Kulezi zinhlobo zemisebenzi neminye ehlobene nezeMpilo kuzofanele silinde i-Apple ukuthi yethule okugqokekayo okusha nemikhiqizo emisha ngo-2017, asevele esinikeze izinkomba ezithile ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Nginethemba lokuthi ngonyaka ozayo kuzofika uhlobo oluthile lwebhande noma isongo elingabizi kakhulu elizama ukufinyelela emkhakheni ongabheki iwashi ngezicelo, kepha okulula nokuvela ku-Apple.
Ngabe uhlela ukuthola i-Apple Watch 2? Ucabangani ngomqondo esinawo manje?
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » I-Apple Watch 2 ingaletha izinketho zokugcina
I-Apple's campus yase-Apple ixoshwe ngomlilo welanga